Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo dhagax dhigay waddooyin “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo dhagax dhigay waddooyin “SAWIRRO”
Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kormeer shaqo kusoo maray qaybo kamida magaalada Bosaaso ee xarunta ganacsiga u ah Puntland.
Kormeerka uu maanta ku marayey magaalada Boosaaso ayaa waxaa ku weheliyey gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo), duqa degmada Bosaaso Eng. Yasiin, taliyaha qaybta gobolka Bari iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland.
Ugu horayn horayn Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wuxuu dhagax dhigay waddo cusub oo laamiya oo dhererkeedu yahay hal kiiloo mitir iyo lixboqol iyo konton mitir, wadadaas oo laga hirgelinayo xaafada New Boosaaso oo kamida xafadaha waaweyn ee magalada Boosaaso.
Jidkan laamiga ah ee uu Madaxweynaha dawladd goboledka Puntland maanta dhagax dhigay ayaa waxaa loo bixiyey Ugaas Yaasiin, wuxuuna noqonayaa jidkii 11-aad ee laga hirgeliyo magalada Boosaaso mudo labo sanadood gudahooda.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa dhagax dhigay jid cusub oo laamiya oo isna laga hirgelin doona xafada laanta hawada ee magalada Boosaaso, jidkaas oo loo bixiyey Beeldaaje Cabdilaahi ayaa noqonaya jidkii 12-aad ee laga hirgeliyo magalada Boosaaso.
Dhinaca kale Dr Cabdiweli Gaaas ayaa soo kormeeray dhismaha suuq cusub oo laga hirgelinayo badhtamaha magalada Bosaaso, dhismaha suuqa cusub ayaa waxaa hirgelinaya dawladda Jaban, wuxuuna suuqani noqon doonaa suuq casriya oo ka kooban afar qaybood oo waaweyn oo dadku ka adeegtaan, suuqaasoo laga hirgeliyey xaafatul Carab.
“Mashaariicda kala duwan ee laga hirgeliyay magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee Puntland waa tallaabo hore loo qaaday, waana ku bogaadinayaa mamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso ka qaybgalkooda fulinta mashaariicdan laga hirgeliyey magaalada Boosaaso, markasta muhiimada waxaanu siinayney horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, waana ku dedaalaynaa in isbeddel iyo horumarin lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaale ee Puntland, qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka kaleba waxaan ku adkaynayaa inay ilaashadaan mashaariicda horumarineed ee laga fuliyey deegaankooda una diyaar garoobaan ka faa’iidaysiga mashaariicda horumarineed ee imaan doona” ayuu yiri Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boostada oo ka qeyb galay Shir lagu qabtay Tunisia (SAWIRRO)